यो प्यारा र आकर्षक नयाँ खेलमा स्वागत छ जुन हामी यहाँ भिडियोलिट्स.com प्रस्तावमा छौं; पपपे Payday! यस महान् भिडियो स्लटमा तपाइँ धेरै फरक र प्यारा कुत्तहरू, कुत्ता हड्डिहरु, कुत्तेको खाना र अधिक बोल्नुहुनेछ। त्यहाँ ठूला ठूला सुविधाहरू छन् जसले ठूलो विजयको मौका बढाउँछ!
यो एक पाँच पाङ्ग्रा हो, £ 1 मा न्यूनतम शर्तको साथमा तीन पङ्क्तिहरू र नौ paylines भिडियो स्लॉट0.01 र एक maxbet मा £ xNUMX को रूप मा ज्यादा! यसको मतलब यो खेल सबै भन्दा बटुलेका लागि उपयुक्त छ र विशेष गरी ती व्यक्तिहरू अझ बढी शर्त चाहँदैनन् तर अझै पनि ठूलो जित्ने मौका छ। तपाईं उत्साह खोज्दै तर धेरै पैसा खतरा गर्न चाहँदैनन्, पिल्ला Payday तपाईं को लागि एक उत्तम खेल हो!
नि: शुल्क स्पिन प्रतीक शब्द "नि: शुल्क स्पिन" मा लेखिएको कुत्ते को कटोरा हो। नि: शुल्क स्पिन सुविधाहरू सक्रिय गर्न कुनै पनि लिङ्कमा तीन नि: शुल्क स्पिन चिन्हहरू प्राप्त गर्नुहोस्। तीन प्रतीकहरूले तपाईंलाई5निःशुल्क स्पिन दिन्छ, चार चिन्हहरूले तपाईंलाई 10 निःशुल्क स्पिनहरू प्रदान गर्नेछ र5प्रतीकहरू तपाईंलाई 15 निःशुल्क स्पिन दिनेछन्! यी नि: शुल्क स्पिनहरू स्वचालित रूपमा खेल्नेछन्।
जंगली प्रतीक एक प्रतीक हो जुन एक जस्तो देखिन्छ सुनको शब्द "जंगली" र एक कुकुर हड्डी संग सिक्का। जंगली कामहरू सबै अन्य प्रतीकहरूको लागि एक विकल्पको रूपमा नि: शुल्क स्पिन प्रतीक बाहेक। जंगली प्रतीक कार्य गर्नेछ ताकि यसले उच्चतम सम्भावना पुरस्कार दिन्छ! एक active payline मा एक जंगली प्रतीक संग जीत डबल हुनेछ यदि भरी विजेता संयोजन को भाग होइन!
स्वत: ब्राउजर चयनकर्ताको साथ तपाईं सबै स्पिनका लागि स्पिन बटन क्लिक नगरेसम्म 250 स्पिनको साथ खेल्न सक्षम हुनुहुनेछ। स्पिन बटनको बाँयामा स्थित रातो स्वत: ट्याब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र रिल को मात्रा प्रविष्ट गर्न बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाइँ सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं सही बटन प्रविष्ट गर्न चरण बटनहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं आफ्नो स्पिन सेटिङहरूसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, केवल स्वत: ओटो बटन धक्का दिनुहोस् र तपाईंको स्पिन सुरू हुनेछ! तपाईं कुनै पनि समयमा रातो रद्दी बटन थिचेर स्वत: विशेषता सुविधा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न प्रतीकहरू र भुक्तानीहरूको बारेमा थप पढ्नका लागि निलो पेटीबल बटन दाहिने तल्लो कुनामा थिच्नुहोस्। नियमहरूको बारेमा पढ्न, नीलो प्वाइटेबल बटन धक्का दिनुहोस्, त्यसपछि बायाँ तलको कुनामा नियम बटनलाई धक्का दिनुहोस्।
यस खेलमा संगीत सुन्दर र खुसी छ। पृष्ठभूमिमा तपाईंले सुन्नुहुनेछ चराहरू चिरिङ र कुकुरहरू। यो साँच्चिकै खेल खेल सूट गर्दछ र यो मजेदार खेलमा राम्रो भावना थप्छ। के तपाईँ बिना आवाजहरू प्ले गर्न चाहनुहुन्छ? कुनै समस्या छैन, तल बायाँ कुनामा अवस्थित संगीत प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्!
यसैले "pawsome" भिडियो स्लॉट याद नगर्नुहोस्; हामी तपाईंले ग्राफिक्स, भ्वाईस र खेल प्ले बाट आशा गर्नुहुने सबै चीज प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं सरल ढाँचा, महान डिजाइन, प्यारा कुत्तों र निश्चित रूपले सराहना गर्नेछन्; ठूलो मौका को लागि धेरै पैसा जीतने को मौका!
ब्ल्याक ज्याक मोबाइल
पिल्ला Payday अपडेट गरिएको: जनवरी 22, 2019 लेखक: आमिर Berrey
2.0.0.1 स्क्रैच ahoy
2.0.0.2 ब्ल्याक ज्याक मोबाइल
2.0.0.3 धेरै तातो
2.0.0.4 स्पीड नगद
2.0.0.7 डबल जोकर4प्ले पावर पोकर